Keyလော့ဂ်ger မလေး နိုင်းယိုမိုင်းယား — MYSTERY ZILLION
Keyလော့ဂ်ger မလေး နိုင်းယိုမိုင်းယား
January 2010 edited September 2010 in Sharing
ဤ Title အား Keylogger မလေး ညိုမြ (Nyo Mya) ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်။
နာမည်က ညိုမြပါရှင်။ ဦးညိုမြရဲ့ မွေးစားသမီးပါ။ ညိုမြရဲ့ ဖခင်အရင်းကတော့ အမေရိကားမှာ ရှိပါတယ်။ သူ့ဆီမှာတုန်းက Illegal purpose အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ ကုဒ်တွေပါတော့ ညိုမြကို အန်တီ kasper မိုး က စက်တွေထဲမှာ ပေးမနေဘူးလေ။ အခု ဦးညိုမြကြီး ပြန်ပြင်ပေးလိုက်တော့ အန်တီKasperမိုးကော။ သူတို့ညီအစ်မ အန်တီတစ်တွေပါ ညိုမြကို ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ နေဖို့ခွင့်ပြုပေးမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှင်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ဘယ်သူတွေ ဘာတွေဖွင့်ပြီး ဘာတွေရိုက်သွားတယ် ဆိုတာကို သိနိုင်အောင် ညိုမြက စောင့်ကြည့်ပေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စက်မဟုတ်ဘဲ သူများစက်တွေထဲမှာတော့ ညိုမြကို ပေးမနေခိုင်းကြပါနဲ့ရှင်။
Electricity - 180 Volt at least
Windows OS run နေသော ကွန်ပျူတာ - 1 Set
တစ်ပါးသူအား ထိခိုက်နစ်နာအောင် မလုပ်လိုသည့် ဆန္ဒ - 67% or above
1. Shake your body well before use.
2. Icon ကို ကလစ်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင် ၀င်းဒိုးတစ်ခုတက်လာပါမယ်။ အဲဒီ ၀င်းဒိုးက click နှိပ်ရင် တစ်ကြိမ်သာတက်မယ့် ၀င်းဒိုးပါ နောက်ပိုင်း ဖွင့်ရင် အဲဒီ ၀င်းဒိုးတက်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ၀င်းဒိုးမှာ Start with windows ဆိုတာကို check ပေးရမယ့် check box တစ်ခု ပါပါတယ်။ အဲဒီ၀င်းဒိုးကို နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ခေါ်ချင်ရင် common prompt ထဲ၀င် ညိုမြကို ထည့်ထားတဲ့ directory ကို ပြောင်းပေးပြီး nyomya -s လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အဲဒီ၀င်းဒိုးကို ပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ Example - ညိုမြကို C:\_Nyomya ထဲမှာ ထည့်ထားလို့ဆိုကြပါစို့..
common prompt ထဲ၀င်ပြီး cd C:\_Nyomya လို့ ရိုက်ပြီး directory ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။
၂. ညိုမြကို ဖွင့်လိုက်ပြီး မကြာခင်မှာ အဲဒီ folder ထဲမှာပဲ nyomya.dll ဆိုတဲ့ ဖိုင်တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ဖိုင်က key log တွေမှတ်ထားတဲ့ ဖိုင်ပါပဲ။ အဲဒီဖိုင်ကို notepad နဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါ။ အဲဒီဖိုင်ကို အများဆုံး 5MB ပဲ limit ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီဖိုင် size ဟာ 5MB ကျော်သွားတာနဲ့ ဖျက်ပစ်ပြီး အသစ်ပြန် create လုပ်ပါမယ်။
၃. ညိုမြကို ပိတ်ချင်ရင် F12 ကိုနှိပ်ပါ။
ဤပရိုဂရမ်အား Internet Cafe များနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သော နေရာတွင် မထားရ။ (ထားမိရင်လည်း F12 နှိပ်ပြီးပိတ်တာနဲ့ nyomya.dll ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာပါ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ သိပ်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်စက်ကို သုံးသုံး F12 လေးသာ အရင်နှိပ်ကြည့်ကြ။:D)
File Size - 751 kb
ရှင်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဘယ်သူတွေဘာတွေ၀င်နှိပ်သွားလဲ စောင့်ကြည့်ပေးချင်သူ
ဦးဦး အေဗီဂျေ ကလဲ နေခွင့်ပြုပါတယ် သူ့သူငယ်ချင်း ဘစ်ဒဖင်ဒါကတော့ တစ်ခါတစ်ခါ နင်ထုတ်ချင်နေတယ် :65:
khit100 wrote: »
ညိုမြကိုချစ်မဲ့သူတွေထဲမှာ Alexander လဲပါမယ်ထင်တယ်။
ခုတော့ .... လေ့လာလိုက်ဦးမယ်။
အဆင်ပြေရင် ... ခိုးပြေးမယ် .....
download ချပြီး စမ်းပြီးသွားပြီ...ကောင်းလိုက်တာ...ကြိုက်တယ်
ဒါပေမယ့် mouse နဲ့ နေရာပြောင်းပြီး စာရိုက်လိုက်ရင် သူ က အမှားတွေ ပြကုန်ရော ...
ဥပမာ aple ရိုက်ပြီးမှ mouse cursor ကို "a" နဲ့ "p" ကြားသွားပြီး "p" တစ်လုံးထပ်ရိုက်လိုက်ရင် သူက aplep ဆိုပြီးတော့ပြရော....
နောက်ပြီးတော့ သူတို့ ကို mail ထဲထည့်ထားပြီး သုံးလို့ရတယ်ပြောကြတယ်...
ဘယ်လို ထားရတာလဲ ဆိုတာလေးပြောပြကြပါဦးလား
ဒေါင်းပြီးဖြေပြီးဖွင့်လိုက်တာ :5: ညိုမြလေးတော့တွေပါရဲ့
ကလစ်နီပ်လိုက်တော့ nyo mya is running ဆိုပြီး ညိုမြလေးပတ်ပြေးနေပါတယ်
သိတွားဘီဗျာ ဘယ်သူမှလညး်ပြောဘူး ကျေးဇူးပဲအဟီး
အဲဒါ ဘာလုပ်တဲ့ software လဲ ကျနော်နားမလည်လို့၇ှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ
တွားပါဂျီဂျာ AVG9ကိုUpdate လုပ်ပြီး Scan စစ်မိလိုက်တာ ညိုမြလေး သွားရှာပါရောလား အကိုတို့ရယ်
August 2010 edited August 2010 Registered Users, Moderators
AVG Antivrus က Trojan horse PSW.Generic7.B0PP ဆိုပြီး Detect သိနေပါတယ်။
ှShare Section အတွက် အကြံပြုချက်လေးပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ မိမိတို့ရဲ့ Share လုပ်တဲ့ Software လေးတွေကို Screenshot လေး အနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်နဲ့ တွဲပြီးတင်တာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Software တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရတာပေါ့ .. ပြီးတော့ Software နဲ့ပက်သက်တဲ့ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်လေးတွေပါ မိမိတို့အနေနဲ့ ထည့်ရေးလို့ရတာပေါ့..
ကိုယ့်လူ F12 နှိပ်လိုက်လေ. အရှေ့က ပို့စ်တွေမှာရေးထားတယ်နဲ့တူတယ်။ F12 နှိပ်ပြီးတာနဲ့ OK တန်းမနှိပ်လိုက်နဲ့ဦး။ သူ့ရဲ့ Pate လမ်းကြောင်း ကိုကြည့်ပြီး သွားဖျက်လိုက်ရုံပါပဲ။
yes<br>i also love it.<br><br>Hey<br>Kasper AV 2010 catches it even in Rar.file.<br>